The Kpop Times - အေဂျင်စီတစ်ခုတည်းမှ အနုပညာရှင် အချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ အတွဲ (၄) တွဲ
အေဂျင်စီတစ်ခုထဲက အနုပညာရှင်တွေဟာ မိသားစုတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တွဲဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေလည်း ရှိကြပါတယ်၊၊ အဲ့ဒီထဲက တစ်ချို့ကတော့ ...
1 . Taeyeon ( Girls’ Generation ) နဲ့ Baekhyun (EXO)
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ Taeyeon နဲ့ Baekhyun သူတို့နှစ်ဉီးရဲ့ ချိန်းတွေ့နေကြတဲ့ပုံအချို့ဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ တွဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းဟာဆိုရင် လူအတော်များများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး SM Entertainment က သူတို့နှစ်ဉီး တွဲနေတာ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
Taeyeon နဲ့ Baekhyun တို့သည် ရည်းစားသက်တမ်း ၁နှစ်နဲ့ ၄ လအကြာမှာ နှစ်ဉီးသဘောတူ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ် ။ လမ်းခွဲခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့နှစ်ဉီးရဲ့ မအားလပ်တဲ့ အချိန်ဇယားတွေေကြောင့်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
2 . HyunA နဲ့ Dawn
HyunA နဲ့ Dawn နှစ်ယောက်လုံးဟာ CUBE Entertainment ကပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ အေဂျင်စီ တော်တော်များများက ကိုယ့်အေဂျင်စီမှာရှိကြတဲ့ အနုပညာရှင် အချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်ကြတာကို လက်ခံလေ့မရှိကြပါဘူး၊၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မှာ HyunA နဲ့ Dawn တို့တွဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် CUBE Entertainment က ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
CUBE Entertainment ရဲ့ ငြင်းဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ရှိပြီးမကြာခင်မှာပဲ HyunA နဲ့ Dawn တို့ဟာ သူတို့နှစ်ယောက် တွဲနေတာမှန်ကန်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ CUBE Entertainment ဟာဒီကိစ္စကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘဲ သူတို့နှစ်ဉီးနဲ့ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကိုတော့ အချင်းချင်းယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားလို့ လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်၊၊
” CUBE Entertainment ရဲ့ အနုပညာရှင်နှစ်ဉီး ဖြစ်တဲ့ HyunA နဲ့ E’dawn ( Dawn ရဲ့ ဖျော်ဖြေရေးနာမည်ဟောင်း) တို့ဟာ အေဂျင်စီကနေ နုတ်ထွက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ကျနော်တို့ အေဂျင်စီက အနုပညာရှင်တွေကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးဆုံးနဲ့ အလိုအပ်ဆုံးအချက်ကို အနုပညာရှင်တွေနဲ့ အေဂျင်စီကြားက အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုလို့ သဘောထားပါတယ်။ဆွေးနွေးညှိ့နှိုင်းမှုတွေများစွာရဲ့ ရလဒ်ကတော့ HyunA နဲ့ Dawn အပေါ်ထားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မူ့ကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။" လို့ CUBE Entertainment မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။
အခုလက်ရှိမှာ HyunA နဲ့ Dawn ဟာဆိုရင် P –NATION ဖြစ်တဲ့ PSY ရဲ့ အေဂျင်စီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
3 . Krystal (f(x)) & Kai (EXO)
၂၀၁၆ ခုနှစ် မှာ Dispatch ဟာ Kai နဲ့ Krystal တို့ တွဲနေကြတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေများစွာရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းထွက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ SM Entertainment နေပြီးတော့ သူတို့နှစ်ဉီးတွဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တွဲပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကျော်အကြာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ နှစ်ဉီးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ လမ်းခွဲရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ “မအားလပ်တဲ့ အချိန်ဇယားတွေကြောင့် တစ်ဉီးအပေါ်တစ်ဉီး အချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပိုပြီး အာရုံစိုက်ချင်လို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
4 . Yeeun ( Wonder Girls အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း) နဲ့ Jinwoon ( 2AM)
JYP Entertainment ရဲ့ အနုပညာရှင် နှစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Yeeun နဲ့ Jinwoon ဟာဆိုရင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ စပြီးတွဲခဲ့ကြပါတယ်။ အေဂျင်စီတစ်ခုထဲမှာ ခဏခဏ တွေ့ရင်း သံယောဇဉ်တွယ်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ဉီးရဲ့ အချစ်ရေးဟာ လေးနှစ်နီးပါးရှိနေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ ပုံမှန်သမီးရည်စားတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြောင့်လို့ အေဂျင်စီရဲ့ အတွင်းလူတစ်ယောက်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။